Short Brothers Brothers Belfast FSX & P3D
mubvunzo Short Brothers Brothers Belfast FSX & P3D
1 gore 2 ago #837 by Dariussssss
Muchidimbu, AP haina kunyatsoshanda. Kureba, kutungamira nekukurumidza kunobata zvakanaka, asi haisi kutevera nzira yeGasi zvachose. Zvose zvinoratidzika zvakanaka, yakanaka ndege.
1 gore 2 ago #838 by Gh0stRider203
Wakaisa mu GPS mode here? LOL Idk chii chinokosha chawakagadzirirwa kuitira icho kana pasina chachinenge asi chaMu, ndicho Ctrl Shift N
1 gore 2 ago #839 by Dariussssss
Hey Gh0st, chii chiri kumusoro?
Zvose zvakanyatsoita. Pamusoro pe AP iyo pachako, ndiko kushandura, saka, hazvikwanisi kuva nyore kupfuura izvozvo.
1 gore 2 ago #840 by Gh0stRider203
zvakanaka, saka moto moto wako mechanic lol
1 gore 2 ago #841 by Dariussssss
Haha .... zvinonakidza chaizvo.
Lol..yeah, iyo idiot ingangodaro yakakwirira apo yaifamba-famba neAAP ....
1 gore 1 svondo rakapera #938 by DRCW
Chengeta CFG file iri muchikamu chezvikwata, kana iwe usingakwanisi kuwana dambudziko imomo, edza kuisa mune imwe ndege yeAcopilot CFG, uye kana kuwedzera Nav / GPS kushanduka kubva kune imwe ndege se 2D pop up uye kuwedzera kune yako panel panel
Time chokusika peji: 0.225 mumasekonzi